नेपालमा कोरोना कहरः तपाईंको प्रदेश र जिल्लामा कति संक्रमित ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार ६ सय ३४ पुगेको छ । संक्रमित मध्ये पुरुष २४ सय ५० र महिला १८४ जना छन् ।
आज थप एक जिल्लामा संक्रमित भेटिएसँगै कुल ६५ जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस हालसम्म नेपालमा कतिमा भयो कोरोना परीक्षण? यस्तो छ मन्त्रालयको तथ्यांक